Unashamed Australia Recap — Trip LEE - OFISIALY SITE
Roa herinandro lasa izay no nanala tsirambina ka nitodi-doha ho any am-pitan'ny-tany ny sasany ny toerana tena olona. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, ny fitsidihana mpitantana Steadman, ary dia nitodi-doha ho any Aostralia mba hanompo an'i Jesosy.
Inona no nataonay
Izahay, nandritra ny tapa-bolana teo ambanin'ny nandeha alalan'ny Brisbane, Melbourne, Perth, ary Sydney. Ao amin'ny tsirairay tamin'ireo tanàna ireo dia anisan'ny fampisehoana lehibe miainga amin'ny 5,000-10,000 tanora. Talohan'ny ny kaonseritra, izahay nandeha tany ny sasany, ary nanasa azy ireo sekoly any an-mampiseho. Inona izahay ary navela mba hilaza amin'ny maro ny sekoly dia voafetra (satria izy ireo tsy-panjakana kristianina sekoly), fa nanao ny tsara indrindra izahay mba hampahery ny mpianatra sy manoro azy ireo amin'i Kristy.
Tamin'ny fampisehoana, dimy izahay rehetra namely ny sehatra toy ny kotaba, unashamed tantsambo. Izahay nanozongozona ireo dingana ho amin'ny tsara indrindra ny fahafahantsika raha miezaka ny ho tahaka ny mazava araka izay azo atao momba ny filazantsara izay manosika antsika hanao izay ataontsika. Mihoatra noho ny zavatra ry namana te mba hahafantatra an'i Jesosy! Miezaka foana izahay mba ho azo antoka miala gaga ry namana, tsy noho ny fahaiza-manao, fa ny Tompo.
Inona no niaina
Tsy tonga ny mandany fotoana miaraka amin'ny mpino avy amin'ny hafa firenena, sady hafa kolontsaina, avy amin'ny fiaviana samy hafa, izay tia ny mitovy Jesosy ataontsika. Ny iray amin'ireo fifaliana ny handeha ho any amin'ny firenena no efa Nampahatsiahy ny drafitr'Andriamanitra ho “vidim-panavotana ho an'ny tenany ny olona avy amin'ny firenena rehetra.” Andriamanitra no miasa, tsy hoe eto, fa manerana izao tontolo izao, fahavaratra ry namana sy ny fampiasana azy ireo noho ny voninahiny.
Nianatra koa izahay fa miresaka Aussies hafahafa. Izy ireo miantso peppers “capsicum” Ary miantso napkins “towels.” Inona!? Mieritreritra izy ireo na miresaka ihany koa… Rehetra ny dudes dia hanozongozona, NW mahia pataloha jeans ary fiara kely be dia be ny fiara. Ny sasany tamin'ireo mpianatra dia nihevitra Thi'sl Biggie (tsy fantany fa maty izy!) ary nihevitra aho Bow Wow (tsy ny fotoana nahafinaritra indrindra). Mba ho ny sasany ny Tompon'ny maro, no nanome ny sasany Aussie matsiro BBQ, amin'ny zanak'ondry, akoho, ary na dia ny sasany kangaroo. Tena tsara!
This'l mihinana BBQ sasany Kangaroo
Nahoana no tiako izany
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina ny fotoana ao Aostralia no nahazo ny handaka azy amin'ny rahalahiko. Ny fiombonana nanan-karena, fifandraisana no Nihalalina, ary aho araka an'Andriamanitra hery tamin'ny alalan'ny resadresaka. Tsaroako tsara resaka momba ny fanambadiana, fanompoana, ray, mozika, sns. Andriamanitra dia mampiasa resaka toy ny handrisika ahy ho amin'ny asa tsara, ary manao ahy bebe kokoa tahaka Azy. Feno fankasitrahana aho mba ho mpiara-miasa amin'ny rappers, DJ ny, ary ny fitsidihana mpitantana, izay tena tia an'i Jesosy.
Misaotra Anao ny
Te-hisaotra ny asa fanompoana izay nanampy ataovy hitranga, ny maro izay nampiseho tsara mandray vahiny, ary ny mpanohana izay tonga teo amin'ny fampisehoana. Mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka, tianay ianao Aussie!